Ilanga lisithinta kanjani isimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ilanga lisithinta kanjani isimo sezulu
Ilanga. Umthombo wamandla wokuphila eMhlabeni. Yize iqhelelene ngamakhilomitha ayizigidi eziyi-149,6, inomthelela omangalisayo eplanethi yethu encane. Ngaphandle kwayo, bekungeke kube nje ngaphandle kwebhaluni elibandayo, elinamadwala elihamba ngomkhathi.
Kodwa, Ilanga lisithinta kanjani isimo sezulu? Buyini ubudlelwane phakathi kwenkanyezi nomhlaba?
Iplanethi esiphila kuyo inomoya ominyene, kangangoba ingxenye enhle yamandla elanga efinyelela kithi ilahleka lapho sidlula kuyo. Imisebe eyingozi kakhulu, njengemisebe ye-gamma, i-X nengxenye enhle yemisebe ye-ultraviolet, ayifinyeleli kwi-biosphere ngenxa yalolu ungqimba oluzungeze uMhlaba.
Asitholi inani elilinganayo lamandla elanga kuzo zonke izingxenye zomhlaba noma kuzo zonke izinsuku zonyaka. Ngokuya ngokuthambekela kwe-eksisi yeplanethi, kanye nobukhulu besibhakabhaka endaweni ethile, imisebe yelanga ingafika icishe ibe buthakathaka, futhi iqonde ngqo.. Lokhu kuchaza ukuthi kungani ezigxotsheni, izindawo ezikude kakhulu nelanga nalapho umoya ushubile kakhulu, i ithempelesha ingahle iye ku -80ºC noma ngaphezulu, noma ezingwadule ezishisayo zikhuphukela ku-60ºC.
Lokhu kwehlukahluka kudala ingcindezi emoyeni, kwakha imisinga yomoya ejoyina imisinga yolwandle futhi ikhiqize izinto ezifana neziphepho, iziphepho, njll.
1 Imijikelezo yelanga nesimo sezulu
2 Ngabe sibheke e-Ice Age?
Imijikelezo yelanga nesimo sezulu
Ilanga linemijikelezo yeminyaka eyi-11, lapho amabala amaningi noma amancane angabonwa khona. Kuyaziwa ukuthi izindawo ezimbalwa ezikhona, kuzoba kubanda kakhulu emhlabeni. Ngesikhathi se-Little Age Age esukela ekuqaleni kwekhulu le-XNUMX kuya maphakathi nekhulu le-XNUMX, umsebenzi welanga oboniswe emachosheni elanga wawuphansi kakhulu. Lesi sikhathi somsebenzi ophansi, esaziwa ngokuthi yi-Maunder Minimum, esiqondane nesikhathi lapho amazinga okushisa ephansi kakhulu, sithatha ukuthi amabala elanga athonya isimo sezulu.
Ngabe sibheke e-Ice Age?
Kunokungabaza okuningi ngakho. Njengamanje, sicwiliswa esikhathini lapho ilanga linciphisa khona ukusebenza kwalo, futhi ngokusho kwe- a isifundo esishicilelwe kumagazini iSayensi kukhona cishe amathuba ayi-15-20% weMaunder Minimum entsha eyenzekayo.
Ngaleso sizathu, izinga lokushisa lomhlaba wonke lizokwehla ngo-0,1ºCIYurophu, i-Asia kanye neNyakatho Melika yizindawo lapho izobonakala khona kakhulu, ngokuncipha okuphakathi kuka-0,4 no-0,8ºC. Bekungeke kwanele ukumisa ukufudumala kwembulunga yonke, kepha kuzosiza ekukunciphiseni ezindaweni ezibalulwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ilanga lisithinta kanjani isimo sezulu